ICC oo loo gudbiyay dacwo ka dhan ah Fahad & Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
ICC oo loo gudbiyay dacwo ka dhan ah Fahad & Farmaajo
Madaxweynihii hore Farmaajo, eedeysane Fahad Yaasiin, iyo kooxda u shaqeysa ayaa laga gudbiyay dhaco ka dhan ah, oo ku saabsan tacadiyada ay shacabka u geystaan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Cabdullaahi Maxamed Nuur (Nasri), oo kamid ah dadka dhibanayaasha u ah Kooxda waqtigu ka dhamaaday, ayaa sheegay in shaqsiyaad ay ugu horreeyaan Farmaajo, Fahad iyo Cabdiraxmaan Dheere, uu ka gudbiyay dacwo caalami ah.
Cabdullaahi, oo la dhashay Ciise Kaambooni, oo ka mid ahaa saraakiisha caanka ah ee Jubbooyinka oo sanado ka hor lagu dilay Kismaayo, ayaa sheegay in dacwadiisa ay qabatay, Maxkamadda danbiyada caalamiga ah ee ICC, taas oo fadhigeedu yahay dalka Netherlands.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Nairobi, ayuu ku sheegay in sidoo kale, uu dacwada kiiskiisa u gudbiyay hay’adaha garsoorka dalka Kenya, halkaas oo saldhig u noqota inta badan siyaasiyiinta Soomaalida, marka ay degaan xilalka.
Cabdullaahi Nasri, ayaa dhawaan warbaahinta Hanoolaato siiyay wareysi dhowr qeyb ah, oo uu kaga hadlay, dhibaato loogu geystay xabsiga loo yaqaan Godka Jilicow, halkaasoo uu ku jiray in muddo ah, ilaa uu ka naafoobo, ka hor inta uusan ka baxsan Muqdisho.
Dhibanahaan, wuxuu hore u sheegay in hoggaanka hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, ay u geysteen tacaddiyo iyo jirdil, kadib markii uu ka hor yimid damacoodii ku addanaa inuu khaariyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Nasri, wuxuu xusay, in kiiskiisu gaaray qaar ka mid ah safaaradaha dalalka reer galbeedka ee daneeya arrimaha Soomaaliya, kuwaas oo xiriirro la soo sameeyay, kadib markii uu bixiyay waraysigii uu kaga sheekeeyay dhibaatada loogu geystay macaga dowladda.
Sidoo kale, Cabdullahi, wuxuu sheegay in shaqsiyaadka ku jira liiska galka dacwada uu u gudbiyay The Hague, ay ka mid yihiin, Kullane Jiis, Yaasiin Farey, Ibraahin Macallin iyo Axmed Carab, kuwaas oo qeyb ka ahaa dhibaatada loogu geystay Godka Jilicow.